Iikhompyuter - Iindaba zeGajethi | Iindaba zeGajethi (Iphepha 2)
UMicrosoft usandul 'ukuvalelisa Windows 7, enye yeenguqulelo ezidumileyo zeWindows kule minyaka idlulileyo, ...
Izandiso ezikhoyo kwizikhangeli ezahlukeneyo esinazo ngoku zisivumela ukuba senze imisebenzi ethile yemihla ngemihla ...
Ukuba ukhe wehlelwa yinto engemnandanga kwi-malware kwi-Mac yakho, namhlanje sikunceda, enkosi kwii-Malwarebytes, "ukucoca" ikhompyuter yakho ngazo zonke iziqinisekiso
Ungazithumela njani ngokuzenzekelayo ii-imeyile
Ukuthumela zonke ii-imeyile esinazo kwiakhawunti ye-imeyile ye-Gmail yinkqubo elula kakhulu enkosi kwi-Multi Email Forward application
I-LG izisa iimonitha ezintathu zabathandi bemidlalo yevidiyo
Inkampani yaseKorea i-LG isandula ukwazisa iimonitha ezintathu ezitsha eziphendula kwiimfuno zabasebenzisi abathanda imidlalo yevidiyo
Ngokubambisana kwethu kwangoku kunye ne-ASUS ezandleni zethu i-ROG Strix G531, i-laptop ye-gamer ebulela kwiimpawu zayo ze-premium.
Fumanisa yonke into malunga ne-adapter ye-WiFi yangaphandle ye-WiFi eyilelwe ukusetyenziswa kwangaphandle esinokuyithenga ngokusemthethweni.
I-ConceptD: Uluhlu lweencwadana zeencwadana zeAcer
Fumanisa konke malunga noluhlu lwe-Acer ConceptD, usapho olutsha lwenqaku leencwadana zeengcali ezinikezelwe ngokusemthethweni kwi-IFA 2019.
Fumanisa ngakumbi malunga ne-Acer Swift 5 entsha kunye ne-Swift 3, ezincwadini zencwadana ezinobunzima obutsha ezinikezelwe ngokusemthethweni kwi-IFA 2019.
Fumanisa konke malunga nale ilaptop intsha yokudlala engasindi kwi-Acer, iPredator Triton 300 eyatyhilwa ngokusemthethweni e-IFA 2019.
Fumana konke malunga ne-Acer Chromebook uluhlu lweelaptops esele zinikezelwe ngokusemthethweni kwi-IFA 2019 kwaye esele sazi ngayo yonke into.
I-Samsung Galaxy Book S: Ilaptop entsha yohlobo
Fumanisa konke malunga neNcwadi yeGlass S, ilaptop entsha ye-Samsung ethiwe thaca ngokusemthethweni kumnyhadala wayo.
Fumana zonke iindlela onokuzisebenzisa xa ufomatha i-hard drive yangaphandle kwi-Windows, Mac okanye kwi-Linux ikhompyuter.
Uhlalutyo kunye nokuqala kokubonakala kweLogitech G502 Lightspeed
Sivavanye imouse engenazingcingo yeLogitech yabadlali abaninzi. I-G502 Lightspeed entsha iyamangalisa
ILogitech ibonise ukukhanya kwe-G502 entsha kwisixeko saseBerlin. Le mpuku yokudlala yongeza utshintsho olubalulekileyo oluqaqambisa ukunxibelelana kwayo ngaphandle kwamacingo
I-ASUS yazisa ngeNew 13-, 14- kunye ne-15-intshi yeZenBook
Inkampani ye-ASUS isungula uthotho olutsha lweelaptops kwilayini yeZenBook enobungakanani be-13, 14 kunye nee-intshi ze-15. La maqela matsha ayothuka siscreen sabo
Ithemba le-GXT 248 Luno yimakrofoni entsha yabadlala kwiTrust Gaming
Xa sifuna izixhobo zokudlala kunye neqela lethu, kwintengiso sinakho ...
I-AOC yazisa nge-AGON isiGaba sesiThathu seMidlalo yokuGcina abaGadi
Xa kuziwa ekuhlaziyweni kweliso lethu, kwintengiso sinezinto ezintle ekufuneka sizithathele ingqalelo, hayi kuphela ...
U-Wacom utyhila i-Cintiq 16 yayo entsha yabafundi e-CES
I-Wacom isungula i-Cintiq 16 yayo entsha e-CES eLas Vegas, isixhobo esenzelwe abafundi esikwabandakanya iPen Pen 2
I-Acer iphinda ibuyise iincwadana zemidlalo ngeGeForce RT 900 enezixhobo zePredator Triton 2080
I-Acer ihambise uluhlu olutsha lweencwadana zePredator ngeTriton 900 kunye ne-500 exhotyiswe ngeNVIDIA GeForce RTX 2080
Uyifomatha njani ikhompyuter
Fumanisa zonke iindlela ezikhoyo ngoku zokufomatha ikhompyuter yeWindows okanye kwihard drive yediski ngokulula nangokukhawuleza
Xa ikhibhodi iba ngaphezulu kwekhibhodi, iba yiLogitech Craft
Xa ikhibhodi iba ngaphezulu kakhulu kwekhibhodi. ILogitech Craft yibhodi enezinto ezininzi ezinomdla
IiPcComponentes zibeka kwindawo yethu yonke yosuku lonke kwikhompyuter ukubhiyozela uMnyama ngoLwesihlanu
Emva kweminyaka ephantse ibe yi-4 ngaphandle kokuhlaziya zombini iMac Mini kunye neMacBook Air, abafana baseCupertino babonakalisile ukuvuselelwa kwezi zixhobo zombini.
Uyenza njani ikhompyuter yam ukuba ihambe ngokukhawuleza
Uyenza njani ikhompyuter ukuba ihambe ngokukhawuleza. Fumana ezi ngcebiso kunye namacebo alula okwenza ikhompyuter yakho ihambe ngokukhawuleza.
Zonke iinkqubo ezisebenzayo, nokuba zikwisixhobo esiphathwayo, kwikhonsoli, kwiTV ekrelekrele ...
Abathandi bomdlalo sele bezazi izibonelelo zeemveliso zeLogitech. Kule meko, utyikityo nje ...
I-HP ithweswe isithsaba njengenkokeli kwintengiso yePC eSpain
I-HP ikhokelela kwintengiso yeekhompyuter eSpain. Fumana ngakumbi malunga nokuthengisa iikhompyuter kwikota yesibini yalo nyaka eSpain.
Uyenza njani ii-icon zebar yomsebenzi kwi Windows 10
Njengoko iinguqulelo zeWindows ziye zavela, ibar yomsebenzi yathatha indima enkulu. Nge Windows 10, asinayo kuphela ukuba ii-icon kwibar yomsebenzi zincinci kuwe, emva koko siya kukubonisa ukuba singazenza njani ukuba zikhule ngokukhawuleza.
Utshintsha njani ngokukhawuleza phakathi Windows 10 akhawunti yomsebenzisi
Xa ikhompyuter isetyenziswa ngabantu abaliqela, emsebenzini okanye ekhaya, kuhlala kucetyiswa ukuba umntu ngamnye oyisebenzisayo, uguqulelo ngalunye lweWindows, asinike iindlela ezintsha zokutshintsha phakathi kweeakhawunti zomsebenzisi ezohlukileyo esizenzileyo. kwiqela.
Ezi zintsha zii-13- ​​kunye nee-intshi ezingama-15 zeMacBook Pros ezikhutshwe yiApple
U-Apple wasothusa sonke ngokusungulwa okungaqhelekanga okanye endaweni yoko ngokuhlaziya iMacBook Pro yayo ...
Uyifaka njani kwaye uyisebenzise njani Windows 10 simahla
Ukuba awukenzi isigqibo sokuzama Windows 10 kuba awunayo iphepha-mvume elifanelekileyo, kweli nqaku sikubonisa ukuba ungayifaka njani simahla nasemthethweni
Uyitshintsha njani imifanekiso kwiPDF Windows 10
Ukuguqula umfanekiso kwifayile yePDF yinkqubo elula kakhulu eya kuthatha imizuzwana embalwa. Sikubonisa ukuba ungayenza njani.
I-Android P ayizukuvumela ukuba uqhagamshele kwiinethiwekhi zeWi-Fi usebenzisa iWPS
Ukungabikho kokhuseleko olwafunyanwa kunyaka ophelileyo kwiinethiwekhi ze-WPA2, kubangele uGoogle ukuba athathe isigqibo sokususa inkxaso kunxibelelwano lweWPS
Umphezulu Go: enye indlela eya kwi-iPad nge Windows 10 kwaye phantse ngexabiso elifanayo
Enye indlela eya kwi-iPad ye-Apple ivela kwiMicrosoft kwaye ibizwa ngokuba yiSurface Go, isixhobo esihlasela imarike ye- $ 399.
Uyenza njani Windows 10 ngokukhawuleza
Ukusukela oko kwasungulwa Windows 10 kwiminyaka emithathu eyadlulayo, abasebenzisi abaninzi bakhawuleze bamkela eyamva ...
Umphunga uxhoma ipowusta yentengiso ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 zesaphulelo
Ngobushushu, ukuthengisa kuyafika kwaye iSteam ayinakuphulukana nokuqeshwa kubalulekile ngezaphulelo kwinani elikhulu lemidlalo.
UXiaomi usungula ngokusesikweni iMi Laptop Air 13,3 "eSpain
Iilaptops zeXiaomi zifikile ngokusemthethweni kwilizwe lethu, inkampani yaseTshayina isandula ukumisela iMi Laptop Air ...
I-Apple yokulungisa iilaptops ngekhibhodi yebhabhathane engalunganga
I-Apple izakulungisa iiMacbook ngeebhodi zebhabhathane ezineziphene simahla. Fumana ngakumbi malunga nenkqubo yokulungisa inkampani yaseMelika yeelaptops
U-ElRubius uququzelele itonamenti ye-Fortnite kunye nee-youtubers ezili-100 ezigqithe ababukeli abaphilayo abangama-700.000
U-ElRubius uququzelele nge-22 kaJuni ngetumente apho i-100 yeetubers yajongana kunye nabanye abantu ...
I-Wacom iveza iitafile ezintsha zokusebenzisa elona candelo lethu loyilo
I-Wacom ibonakalisa i-Cintiq Pro ene-intshi ezingama-24 enamandla kunye nabayili beengcali, kunye neWacom Intuos zazo zonke iintlobo zabasebenzisi.
Fumana uninzi lweNetflix ngezi zandiso zeChannel
Ukuba unayo iPC exhunywe kwikhompyuter yakho kwaye ufuna ukufumana okungcono kwiakhawunti yakho yeNetflix, nazi izandiso ezilungileyo zeChannel.
ISanhok, imephu entsha yePUBG yePC ekhoyo ngoJuni 22
Ukuqala nge-22 kaJuni, abasebenzisi be-PUBG PC baya kuba nakho ukonwabela imephu entsha: iSanhok, imephu encinci enemozulu etshintsha rhoqo.
Imiyalezo ye-Android ngoku iyafumaneka kwi-PC yethu ngewebhu
Isicelo sokuthumela imiyalezo ye-Android senze nje indlela yaso kwiidesika zekhompyuter yethu ngewebhu
UGoogle ufuna Windows 10 isiqinisekiso seencwadi zePixel
Ukukhangela kwi-Intanethi, uGoogle, ujonge isatifikethi esifanelekileyo ukuze akwazi ukuqhuba Windows 10 kwiPixelbool
Isamsung Chromebook Plus V2, ene-S-Pen kunye nekhamera ye-13 Mpx kwikhibhodi
Isamsung yazisa ngesixhobo esitsha esisekwe kwiChannelOS. Igama layo yi-Samsung chromebook Plus V2 kwaye sikuxelela yonke into ekunika yona
I-Steam iyayeka ukubonelela ngenkxaso kwiikhompyuter zeWindows XP kunye neVista kunyaka olandelayo
Iqonga lomdlalo wevidiyo kaSteam liza kuyeka ukuxhasa iinguqulelo ezindala zeWindows, kubandakanya iWindows XP kunye neWindows Vista
Ukuqikelela, iApple iya kubheja kwi-USB-C kwisizukulwana esilandelayo se-iPhone
Ukuya kumahemuhemu amva nje, yonke into ibonisa ukuba ekugqibeleni iApple yayiya kuthatha isigqibo sokwenza ngaphandle kwesinxibelelanisi sombane kwi-iPhone nakwi-iPad elandelayo.
I-AMD iphendula kwimisipha ye-Intel ngesizukulwana sesibini se-Threadripper kunye ne-32 cores
Ukuba izolo yayiyi-Intel esothusileyo ngeeprosesa zayo ezintsha ze-28-core, namhlanje yayiyi-AMD ethi ivelise isizukulwane sayo esitsha se-Threadripper processor, esinee-32 cores kunye ne-64 imisonto.
IMacOS Mojave iya kuba yinguqu yokugqibela ye-macOS ehambelana nokusetyenziswa kwe-32-bit
IMacOS Mojave, iya kuba yinguqu yokugqibela ye-macOS eya kuhambelana nezicelo ezenzelwe i-32 bits, usetyenziso oluya kufuneka luhlaziywe ukuba bafuna ukuhlala benokhetho kubasebenzisi kwiVenkile ye-Mac App.
I-ASUS ZenBook Pro eneScreenPad, ilaptop enesikrini sokuchukumisa kwi-trackpad yayo
I-ASUS ZenBook Pro ngumgca omtsha weelaptops zoochwephesha abanescreen sesibini esifakwe kwiipads zabo ezifanelekileyo ezibizwa ngokuba yiScreenPad
I-Intel itsala umsipha nge-28-core 56-thread 5Ghz processor
Ukuthatha umbhiyozo weComputex 2018, i-Intel isandula ukuveza ngendlela echuliweyo kubo bonke ababonisa iprosesa esisiseko ye-28, imisonto engama-56 ngaxeshanye kunye nesantya esisezantsi ukuya kuthi ga kwi-5 Ghz enokuthi ibe phezulu kwimowudi ye-turbo.
Ukuqaqambisa ngokusesikweni ukuthengwa kwecandelo lePC leToshiba
I-Sharp yenza ukuthengwa kwegosa likaToshiba kwicandelo lekhompyuter. Fumanisa okungakumbi malunga nalo msebenzi abuyela ngawo uSharp kwicandelo lekhompyuter.
Ingalo iveza iichips zayo ezingama-7 ze-nanometer zenzelwe kuphela ii-smartphones eziphezulu
Ingalo, ngexesha lokugqibela lenziwa kwimithombo yeendaba, yenza ngokusesikweni ukufika ukuya kwiitshipsi ezintathu ezintsha ezenziwe kusetyenziswa itekhnoloji ye-7-nanometer.
I-Acer yazisa nge-15-intshi ye-Chromebook yayo eguqukayo
Inkampani ye-Acer isandula ukuhambisa ii-laptops ezimbini ze-Acer Chromebook, ezilawulwa yi-ChromeOS, enye yazo kudidi lwezinto eziguqukayo.
I-HP Omen 15 2018, amandla ngakumbi kwi-chassis encinci kunye nokukhanya
I-HP iphucule ilaptop yayo yokudlala kwaye ivelise i-HP Omen 15 2018, icompact ngakumbi kwaye ngaphezulu kwayo yonke ikhompyuter enamandla ngakumbi xa kuthelekiswa nohlobo lwangaphambili
I-Acer Predator iveza i-X27: 4K, HDR kunye ne-G-Sync ye- $ 1.999 kuphela
Naliphi na isincedisi, esilunge ngokuphakathi, esijonge ukuba sikwazi ukonwabela izinto esizithandayo kwikhompyuter yethu azinalo ixabiso elifanayo ...
Iimpawu ezenzelwe ukuba ilaptop efanelekileyo yokudlala ibe nayo ngo-2018
Yintoni ebonisa ukuba ilaptop efanelekileyo yokudlala kufuneka ibe nayo. Fumana izinto ezisisiseko ekufuneka zonke iilaptop ezifanelekileyo zokudlala zibe nazo namhlanje. Isikhokelo esiya kukunceda ukhethe owona mzekelo mhle.
IDevolo iveza i-dLAN 1000 mini, i-compact PLC
Umvelisi waseJamani u-devolo usandula ukwazisa inguqulelo ye-DLAN PLCs, esinokuthi ngayo sandise umqondiso we-Wi-Fi endlwini yethu ngaphandle kwengxaki kwaye ngesantya esimangalisayo.
Ifowuni yakho evela kwaMicrosoft, iyakusivumela ukuba silawule i-smartphone yethu kwiPC
Izolo usuku lokuqala lwe-2018 yokwakha ibibanjelwe, iintsuku eziququzelelwa nguMicrosoft minyaka le eSeattle ...
IHuawei yaphula irekhodi lokuthengisa kunye nee-smartphones ze-P
Ngaphandle kokungabikho e-United States ngenxa yenkcaso kurhulumente welizwe, ukuthengiswa kwe ...
Ngokweengxelo ezithile, i-Facebook iseta isebe eligqibeleleyo lokuphuhlisa kunye nokwenza into entsha yokusebenza ngobukrelekrele bokuzenzela.
Hlonipha iMagicBook, enye ilaptop yeHuawei enezinto ezintle kunye nexabiso elinomtsalane
IHlonipho iMagicBook lilaptop yokuqala evela eAsia. Liqela elinokuhlelwa ngaphakathi kwee-ultrabooks; Uyilo olukhulu kunye nexabiso elingenakubekwa
I-GXT 590 Bosi iBluetooth ngumlawuli omtsha wokudlala weTrust we-Android kunye neWindows
Umenzi weTrasti uveze i-GXT 590 Bosi Bluetooth entsha, ulawulo olukude lwaso nasiphi na isixhobo esilawulwa yi-Android kunye neWindows.
I-AOC yazisa ngoQeqesho lokuQala nge-AMD Radeon FreeSync 2 kunye neVESA DisplayHDR 400
I-AOC eqinileyo isandula ukubeka iliso lokuqala nge-AMD Radeon FreeSync 2 kunye neVESA DisplayHDR 400 edityaniswe kwiscreen se-31.5-intshi kunye nenqanaba lokuhlaziya le-144 Hz.
U-Apple uqinisekisa ukuba iMac Pro iza kufika kwintengiso ngo-2019
Abafana abavela eCupertino baqinisekisile ngokusesikweni kwiTechCrunch ukuba iMac Pro iza kutyhilwa ngokusesikweni ngamanye amaxesha kunyaka olandelayo.
UPhilips wazisa esweni esweni i-27-intshi ye-QHD eyilelwe ukuphucula imveliso yethu
Inkampani yasePhillips ivelise esweni esweni ngesisombululo se-QHD kuluntu olufunwa kakhulu ngee-intshi ezingama-27 zesisombululo kunye ne-ergonomics engenakulinganiswa.
I-Apple iya kusebenzisa iiprosesa zayo kwiiMacs
UApple ulahla i-Intel kwaye uza kusebenzisa eyayo iprosesa kwiiMacs.Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani zokuqalisa ukusebenzisa ezabo iiprosesa kwiikhompyuter zayo.
Isamsung yazisa iNcwadana yeNqaku leNqaku 3 kunye neNcwadi yamanqaku yeNqaku 5
Isamsung yazisa umgca wayo omtsha weelaptops: i-Samsung Notebook 3 kunye ne-Samsung Notebook 5. Zombini zineempawu ezifanayo kunye nobunzima obungaphantsi kweekhilogremu ezi-2.
I-Xiaomi Mi yeLaptop yokudlala, ilaptop yohlobo lomdlalo kubadlala umdlalo
I-Xiaomi Mi yeMidlalo yeLaptop yilaptop yokuqala yenkampani yaseTshayina egxile kwicandelo lomdlalo wevidiyo. Ukucwangciswa okubini okunokwenzeka kunye nexabiso lokungqisha
Ikhompyuter eyaphukileyo ibangela ukuba phantse i-400 yezigidi zeedola zegolide iwele koku kungabikho
Ngenxa yengxaki kwenye yeekhompyuter zayo, kuqikelelwa ukuba kubangelwe kukungalungisi okwenziweyo, inqwelomoya elayishwe ngegolide, iigugu kunye neplatinamu, ilahlekelwe yiyo yonke imithwalo yayo phakathi kubhabho ngelixa iwela iRussia.
Eyona SSD inkulu ehlabathini iyasivumela ukuba sigcine i-100 ye-TB
Inkampani iNimbus, isandula ukuhambisa i-SSD yokuqala ngomthamo ukuya kuthi ga kwi-100 TB yokugcina
Incwadi kaMicrosoft Surface 2 ngoku inokuthengwa eSpain
Iqela lokugqibela leMicrosoft lifika eSpain. Yincwadi ye-Microsoft Surface Book 2. Nangona unokufumana kuphela, okwangoku, kunye nohlobo lwe-13,5-intshi
Uyithumela njani iifayile ezinkulu
Ukuba sizifumana sinesidingo sokuthumela iifayile ezinkulu, kweli nqaku sikubonisa inani elikhulu lezinto onokukhetha ukuzenza ngokukhawuleza nangokulula.
UToshiba DynaEdge, ikhompyuter epokothweni ehamba neiglasi ezikrelekrele
UToshiba uyaqhubeka nokubheja kwicandelo leshishini. Kwaye into yakhe yamva nje ibizwa ngokuba yiToshiba dynaEdge equlathe ipokotho Windows 10 ikhompyuter kunye neiglasi ezikrelekrele.
Imodeli entsha yeRaspberry Pi 3 B: isantya esingaphezulu kunye ne-5 GHz iWi-Fi
Isizukulwana esitsha seRaspberry Pi ngoku siyafumaneka kunye nophuculo kunxibelelwano lweWi-Fi kunye nesantya seprosesa.
Ithemba i-EVO Cwaka engenacingo, ikhibhodi kunye nempuku ngamaqhosha athuleyo
Ngaba ungomnye wabo bathayipha ezinzulwini zobusuku? Ukhalisile ukuba senza ingxolo enkulu? Ithemba i-EVO Silent Wireless yiphakheji yakho efanelekileyo
I-ASUS yazisa nge-4-intshi ye-IPS 32K UHD entsha yokujonga esweni
I-ASUS yenye yeefemu ezaziwayo kwicandelo lobuchwephesha kwiimveliso zalo kwaye kule meko sine ...
Idatha iyavuza ekusebenzeni kwesizukulwana esitsha se-AMD Ryzen
Akunyanzelekanga ukuba silinde ixesha elide kwidatha yokuqala kunye neempawu zeeprosesa ezintsha ze-AMD ukuvuza, ngakumbi abo bangabesizukulwana esitsha iRyzen.
UPhilips usungula uluhlu lweemonitha ze-IPS kunye neFreeSync ngamaxabiso ahlekisayo
Ezi modeli zibandakanya iiphaneli ze-IPS kunye neFreeSync ukusuka kumaxabiso ajikeleze i-189 yeeRandi kunokuba yinto eza kwaziwa njengoluhlu olutsha lwe-E9.
I-Huawei MateBook X Pro, ilaptop enescreen ngaphandle kwesakhelo kunye nokumangala kwikhibhodi
Ikhompyuter entsha ijoyina ikhathalogu yeHuawei. Le yiHuawei MateBook X Pro entsha, ilaptop enoyilo olukhulu kunye nemfihlo efihliweyo phantsi kwekhibhodi
I-HP iveza uthotho lwayo lweencwadana zeencwadana, i-dock entsha kunye nemiboniso ye-800K
Le layini intsha ye-HP EliteBook 800 iboniswa ngokwefemu ngokwayo njengezona ndawo zokusebenzela ziphathekayo emhlabeni, ...
Ukusebenza kokugqibela: Imowudi yamandla ngaphakathi Windows 10 yokwandisa ukusebenza
UkuSebenza kokuGqibela-Imowudi yamandla ngaphakathi Windows 10 ukwandisa ukusebenza. Fumanisa ngakumbi ngale mowudi yamandla mitsha eza kwinkqubo yokusebenza.
Ukuba ucinga ngokuhlaziya ikhibhodi yakho yakudala yekhibhodi yoomatshini, okokuqala kufuneka uyazi ukuba yeyiphi amandla kunye nobuthathaka bayo, kuba isenokungabi yile nto uyifunayo. Sikuxelela ukuba ikhibhodi yoomatshini inika ntoni, zibiza malini kwaye zeziphi iimodeli ezilungileyo.
Ukuba sesichengeni kweFlash yakutshanje kuchaphazela onke amaqonga
Itekhnoloji yeFlash, eyayinemfashini kwiminyaka elishumi yokuqala yama-2000 kwaye ngoku ayisasetyenziswa, iyaqhubeka nokuba yingxaki enkulu kwezokhuseleko kwizigidi zabasebenzisi, ngakumbi emva kokufunyanwa komngcipheko wosuku lwe-zero.
IMicrosoft yongeza uhlobo lwexabiso eliphantsi lweSaptop
IMicrosoft yazise ngemodeli yenqanaba lokungena elitsha leLaptop yayo engaphezulu. Okwangoku ifumaneka eUnited States kwaye ungagcina iidola ezingama-200
Isamsung iqala ukuvelisa izixhobo zekhompyutha kwimigodi ye-cryptocurrency
Isamsung iqala ukuvelisa iichips zemigodi yeedigital cryptocurrencies. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani yaseKorea zokungena kule marike.
Uyicwangcisela njani ukucima ngokuzenzekelayo kwiWindows nakwiMac
Ukuba asifuni ukuba iPC okanye iMac ichithe iiyure ezingaphaya kwemfuneko ekusebenzeni, eyona nto sinokuyenza kukucima ngokuzenzekelayo, nokuba kukwiWindows okanye kwiMac. Ngaba uyazi ukuba ungayenza njani? Sikufundisa ngeendlela ezininzi zokucima ngokuzenzekelayo ikhompyuter yakho ngexesha olifunayo.
Ungazithatha njani izikrini
Sikufundisa ukuba ungazithatha njani ii-skrini kuzo zonke iinkqubo zokusebenza. Ukuthatha umfanekiso weskrini esikwisixhobo esiphathwayo okanye kwidesktop ngumsebenzi olula kakhulu onokuba luncedo kakhulu. Ngaba uyazi ukuba zenziwa njani izikrini zesikrini? Sichaza apha!
I-Apple ilungiselela ukutshintsha kweMacBook Air ye icon
Isiphelo seMacBook Air sisondele. Ngokwinto esele isaziwa, ukutshintshwa kwayo kukwi-oveni kwaye kuya kuba yimodeli ye-intshi ye-13 yenqanaba lokungena
I-Acer Chromebook Spin 11, isibonisi esitsha sabafundi
Ku-Epreli olandelayo, iAcer Chromebook entsha iya kufika ezivenkileni. Yi-Acer Chromebook Spin 11, ikhompyuter ethi ibe yicwecwe
Batshintsha i-ZX Spectrum elandelayo kwi-laptop ngenxa yoshicilelo lwe-3D
Ngaba ungathanda ukuzenzela ilaptop esekwe kwiZX Spectrum elandelayo? Ewe, apha sikushiya indlela onokuyiphumeza ngayo ngenxa yoshicilelo lwe-3D
IMicrosoft Surface Book 2 iza kufika eSpain kungekudala
Enye yeelaptops ezinqwenelekayo zeMicroosft ziya kufika eSpain kwiiveki ezizayo. Ezi ziimodeli ezili-13 kunye nee-intshi ezingama-15 zeSurface Book 2
Yithi hello kwii-chips ze-QLC, ingcamango ye-Intel yokuguqula ii-SSD
Ukungena apho siza kuthetha khona ngawo onke la marhe athi amagqabantshintshi e-Intel angaliguqula ilizwe le-SSD kwiidrive hard thanks to the development of a new technology called QLC.
Imouse entsha yokudlala: I-Razer Mamba HyperFlux, enomthwalo ongenisa amandla
Kwaye abo bahlala bedlala iiyure ezininzi phambi kwePC bafuna okungcono ukuba bangaphulukani ...
I-Lenovo Miix 630, ezinye izisombululo ezinokuphatheka ngokuzimela okumangalisayo
I-Lenovo ivakalise ukuzibophelela kwayo kwiqonga elihlala liQhagamshelwe lihlala lihlala kwaye igama layo yiLenovo Miix 630, ikhompyuter enomdla enokuzimela
IProjekthi uLinda okanye xa ifowuni yakho yeRazer iba lilaptop
Kuthekani ukuba besinokuxelela ukuba iRazer Ifowuni yakho kungekudala ingaba lilaptop ye-Android? Inkampani isebenza ukwazisa iProjekthi uLinda
I-AKG iveza i-N5005, i-headphones zayo eziphezulu eziphezulu ezisezindlebeni
Inkampani ye-AKG ivelise i-CES, ii-headphone ezintsha ze-AKG N5005 ezijolise kubathandi bomculo kwaye ziyilelwe ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zawo nawuphi na umsebenzisi wepro.
Jonga ukuba iprosesa yakho ichaphazelekile yiSpecter kunye neMeltdown kolu luhlu
I-Intel ipapashe kwiwebhusayithi yayo uluhlu lwazo zonke iiprosesa ezichaphazelekayo ngenxa yokuba semngciphekweni okubalulekileyo kunye nobuzaza obufunyenwe kubo bonke abavelisi.
Inkampani yaseMelika uDell, isandula ukwazisa i-CES, eza kuqala ngeentsuku ezimbalwa, ukuvuselelwa koluhlu lwe-XPS 13 ye-ultraportables
Ukungena apho siza kuthetha khona ngazo zonke iinkcukacha ezikhoyo kwiTrust Vergo, umgangatho ophezulu we-ergonomic bluetooth mouse.
IHuawei ivuselela uluhlu lwayo lweelaptops iHuawei Matebook D (i-intshi ezili-15) kwinxalenye yeeprosesa kunye namakhadi emizobo eIntel amatsha
Isamsung yazisa ngeyona Chip incinci yeDRAM yeHlabathi
Isamsung yazisa ukuba i-chip entsha ye-DDR2018 RAM eyenziwe ngenkqubo ye-4-nanometer yenkampani iya kufumaneka nge-10.
I-Seagate sele ineteknoloji efunekayo ukuphinda kabini isantya se-HDD hard drive
Iinjineli zeSeagate ziphumelele ekuphuhliseni itekhnoloji ekwazi ukuphinda kabini isantya sehard drive eziqhubayo.
Esi sisilumkiso semidlalo esitsha seLGG ngenqanaba lokuhlaziya le-240Hz
Ukujonga esweni okwangoku kwe-LG kusibonisa iscreen se-27-intshi kunye nenqanaba lokuhlaziya le-240 Hz ngaphezulu kwe-500 euro.
I-Ockel Sirius A Pro, amandla ngakumbi kule miniPC yeepokotho
Ngaba uyayifuna Windows 10 ikhompyuter elingana nepokotho yebhulukhwe yakho? U-Ockel Sirius A Pro unokuba sisisombululo sakho
Ikamva leelaptops kukusetyenziswa kweeprosesa ezihambayo. Oku kufezekisa ukuzimela ...
I-Samsung Notebook 9 (2018) kunye ne-Samsung Notebook 9 pen, enamandla ngakumbi kunye ne-S-Pen
Isamsung ineelaptops ezintsha kwikhathalogu yayo: i-Samsung Notebook 9 2018 kunye ne-Samsung Notebook 9 pen ngokuxhasa izimbo ze-S-Pen
Lungisa i- $ 5000 ubuncinci ukuthenga iMac Pro
Ukusukela nge-14 kaDisemba, sinokuyigcina iMac Pro, okoko nje sinemali encinci ngaphezulu kwe- $ 5000 kwiakhawunti yethu yokujonga
Ezona ntloko zibalaseleyo zango-2017
Ukuba ucwangcisa ukuvuselela ii-headphone zakho, kweli nqaku sikubonisa ukuba zeziphi kwaye uqhubeka ukuba zezona zilungileyo kulo lonke u-2017
I-NVIDIA TITAN V, 'yeyona PC inamandla ye-GPU eyakha yenziwa'
I-NVIDIA TITAN V likhadi elitsha lemizobo elinikezelweyo lijolise kwii-supercomputer kwaye ngokusekwe kwiqonga le-NVIDIA Volta
I-ASUS NovaGo, ilaptop eneprosesa ephathekayo kunye neeyure ezingama-22 zokuzimela
Imarike yeelaptop iyazibuyisa kwaye i-ASUS iphakathi kweyokuqala nge-ASUS NovaGo yayo, ilaptop enentliziyo kunye nokuzimela okuhambayo.
I-Lenovo V730, ilaptop ephezulu engenayo ifani 'ThinkPad'
Inkampani yaseTshayina iLenovo yazisa ngencwadi yokuphela ephezulu, egxile kubuchwephesha engenayo ifani ye-ThinkPad. Imalunga neLenovo V730
IMicrosoft Office ngoku iyafumaneka kwiChannelbook
Indawo yeOfisi kaMicrosoft ngoku iyafumaneka kwivenkile yesicelo yeChannelbook simahla.
I-ASUS ZenBook Pro UX550 ngoku iyafumaneka eSpain
I-ASUS isungula ilaptop entsha ephezulu eSpain. Yi-ASUS ZenBook Pro UX550, ilaptop enoyilo elungileyo kunye nokusebenza
Ngaba ufuna i-antivirus kwi-PC?
Ngaba ufuna i-antivirus ngaphakathi Windows 10? Fumana ukuba kuya kufuneka ukhusele ikhompyuter yakho kwaye ulandele ezi ngcebiso zokuthintela ukungena kwe-malware okanye eyingozi.
IMac Pro ye-Apple isebenzisa iprosesa ye-A10 Fusion ukubhenela kuSiri
Umncedisi ka-Apple, uSiri, uvele ngendlela esinokunxibelelana nayo, ngokufanayo ...
Kuthatha kuphela i- $ 5 ukukhangela ikhompyuter ngomzuzu omnye
USamy Kamkar, umgwebi owaziwayo ekuhlaleni, usibonisa indlela yokufumana ikhompyuter kwisithuba esingaphantsi komzuzu.
Ulwakhiwo lwamva nje lweWindows 10, okwangoku kwinkqubo ye-Insider, yongeza into yokwabelana ngefayile ebizwa ngokuba yi-Near Share.
Ngale nsiza ungaqhuba usetyenziso lweWindows kwiChannelbook
I-CrossOver yinkqubo yokuqhuba iinkqubo zeWindows kwamanye amaqonga. Eyokugqibela ukuze ikwazi ukonwabela oku kwi-ChromeOS
UMicrosoft ushiya iKinect ngokupheleleyo
Iminyaka esi-7 emva kokumiliselwa kwayo, iMicrosoft iqinisekisile ukuba iyakuyeka ukuvelisa iKinect, ngenxa yempumelelo encinci ebenayo kwimarike ukusukela oko yasungulwa.
I-Chuwi SurBook Mini iza kufika ngo-Novemba olandelayo
I-Chuwi SurBook Mini yinguqulelo ecuthisiweyo yezixhobo ezithandwayo zenkampani yaseTshayina. Le iya kubetha ezivenkileni nge-11 kaNovemba.
I-AOC ibeka esweni i-intshi eyi-31,5-intshi kulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali
Iliso elitsha elivezwe yi-AOC yee-intshi ezingama-31,5 kunye nesisombululo se-QHD sinexabiso elifikelelekayo kubo bonke abaphulaphuli.
I-HP ZBook x2, eguqukayo enamandla amsulwa
I-HP ZBook x2 yinto eguqukayo yamva nje evela kwinkampani efuna ukukhuphisana neNcwadana yeMicrosoft 2 okanye iMacBook Pro
IMicrosoft Surface Book 2, ilaptop eqinisekileyo yokulwa iMacBook Pro
IMicrosoft Surface Book 2 sisizukulwana sesibini seencwadana zamanqaku ezakhiwe nguRedmond. Zimbini izinto ezahlukileyo kwaye zinamandla ngakumbi. Bazi ngokusondeleyo
UKRACK kubeka ukhuseleko kwinethiwekhi yeWPA2 yeWi-Fi emngciphekweni
Isicelo se-KRACK sithatha ithuba lokuba semngciphekweni we-WPA2 obeka lonke unxibelelwano olisebenzisa emngciphekweni
UPhillips kunye ne-AOC bahlaziya ukuzibophelela kwabo ekuqhubekeni nokukhokela kwimakethi yokubek'esweni
Imakethi yokubeka iliso iyazihlaziya ngokuxhuma kunye nemida kwaye iPhillips kunye ne-AOC ngumzekelo ocacileyo wokuphila ngokuvisisana nabo bonke abathengi babo.
I-Chuwi Laptop Air, ilaptop entsha ephefumlelwe yiMacBook Air
I-Chuwi Laptop Air yi-ultrabook ebonelela ngokuzimela okuhle; Inesikrini esipheleleyo se-HD kunye ne-chassis yealuminium. Zonke ngexabiso elingaphantsi kwama-euro angama-400
Idijithali yaseNtshona ithengisa i-hard drive ene-14 TB yokugcina
Idijithali yaseNtshona isandula ukukhupha esona sixhobo sikhulu sokugcina amandla kunye ne-14 TB yokugcina.
Zonke iifitsha zeGoogle Pixelbook zihluziwe
Ngaphambi kokunikezelwa kwayo, kunokwenzeka ukuba wazi ezinye zeenkcukacha zeGoogle Chromebook entsha, iGoogle Pixelbook
UKano uveza ilaptop ye-DIY yabantwana
UKano ubonise ikhithi entsha ukuze abantwana bafunde iinkqubo ngeyona ndlela imnandi. Imalunga nelaptop yeKano
I-Lenovo ibhiyozela isikhumbuzo seminyaka engama-25 se-ThinkPad yokuqala ngohlobo olukhethekileyo
I-Lenovo ibhiyozela iminyaka engama-25 ye-IBM ThinkPad yokuqala ukuya kwintengiso. kwaye yenza njalo ngohlobo olukhethekileyo: Lenovo ThinkPad 25
Iiprinta ezingabizi kakhulu
Ufuna iiprinta ezingabizi kakhulu? Sikubonisa iimodeli ezintle ngexabiso elikhulu lemali kwaye sikunika iingcebiso xa ukhetha umshicileli wakho
I-chip yeRyzen 5 2500U inikezela ngokusebenza okuphezulu kuneeprosesa ze-Intel
Ngokweemvavanyo zamva nje, iprosesa ye-AMD Ryzen 5 2500U yeelaptops inokugqitha kwi-Intel Core i5-7200U okanye kwiCore i7-7500U.
Idatha ecociweyo malunga neGoogle Pixelbook, ezi ziimpawu zayo
Namhlanje sinedatha eshushu evuzayo malunga neempawu ezibandakanya iPixelbook, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kukunyuka kwamaxabiso.
I-LG Gram ilaptop elula kakhulu kubo bonke abaphulaphuli
Masiyazi ngokuthe ngqo le nto i-LG Gram, eyona ilungileyo, ezimeleyo kunye neelaptop ezininzi ezivela kwinkampani yaseMzantsi Korea.
UXiaomi namhlanje uveze iMi Notebook Pro entsha, ikhompyuter ephefumlelwe yi-Apple's MacBook kwaye eya kuthi ibe nexabiso nge-900 euros.
I-Lenovo Retro ThinkPad ukukhumbuza malunga namaxesha adlulileyo
Lenovo uziva kangakanani xa ehamba ne-Retro ThinkPad? Ewe, kubonakala ngathi kuninzi, kuyinyani ngakumbi kunokuba kuyabonakala kwaye iya kuba lilaptop yodidi.
Imizobo emincinci yeGTX 1080, udade omncinci weklasikhi
Ubungakanani obuncinci abunikezeli kumandla emizobo, ubuncinci yile nto iqela le-NVIDIA belicinga ngayo xa ibizisa iGeForce GTX 1080 Mini ITX.
IPhilips ikwanaso esweni ngesisombululo se8k
Inkampani yaseDatshi uPhilips ivakalise esweni sayo sokuqala ngesisombululo se8k, esweni esingazukufika kwimarike kude kube ngunyaka olandelayo
Le teknoloji iyakwazi ukubulala iiseli zomhlaza kwimizuzwana engama-60
Enkosi komnye wemisebenzi yakutshanje epapashwe yiDyunivesithi yaseDurham, siyazi ngokudalwa kweeanomachines ezikwaziyo ukunyanga umhlaza.
ILogitech Craft yibhodi yezitshixo ephefumlelweyo yiMicrosoft Surface Dial
Inkampani yeLogitech isandula ukwazisa ngeLogitech Craft, ikhibhodi enikezela ngeDial apho sinokuhlela khona imifanekiso esiyithandayo ngokukhawuleza.
I-Lenovo iyaqhubeka nokubheja kwizinto eziguqukayo kwaye iveza iYoga 920 kunye ne720
Inkampani yaseTshayina iLenovo iveze iimodeli ezimbini eziguqukayo kwi-IFA: iYoga 920 kunye neYoga 720
I-ASUS ZenBook Flip S, eguqukayo enobunzima obugqithisileyo
I-ASUS ZenBook Flip S yinto encinci eguqukayo, eqhuba kwiWindows, inomboniso we4K kunye neeprosesa ezinamandla ze-Intel Core
I-Swift 5, i-Spin 5 kunye noTshintsho i-7 zizinto ezinokuguquguquka ezintsha ze-Acer
Ifemu yaseTaiwan ingenise ngokusesikweni uluhlu olutsha lweemveliso eziguqulwayo kunye ne-ultraslim.
I-Acer's Chromebook 15 yinkampani entsha yokubheja i-ChromeOS
Ukubheja kwe-Acer kwakutshanje kwiChannelOS ibizwa ngokuba yiChannelbook 15, imodeli eneeyure ezili-12 zokuzimela ukuya kuthi ga kwi-8 GB ye-RAM
I-Alienware yazisa ezimbini zokubeka esweni i-intshi ezingama-34 ngetekhnoloji ye-G-Sync
I-Alienware isandula ukubhengeza iimonitha ezimbini ezingama-34 ejikajikayo e-IFA ebibanjelwe kwezi ntsuku
I-Acer Predator x35, esweni esifanelekileyo kubo bonke abantu abafuna ukusebenza kunye nomgangatho
I-Acer yenye yeenkampani ezibheja kakhulu kwicandelo lezemidlalo, ngokuchanekileyo lelinye lawona macandelo ...
I-Acer Aspire S24, i-All-in-One edlala isikrini ngaphandle kwezakhelo
I-Acer yenye yeyokuqala ukubonisa izinto zayo ezintsha kwi-IFA 2017 kwaye ngeli xesha iyasimangalisa nge-Acer Aspire S24 entsha.
I-Primux ioxbook 1402f, ilaptop ngexabiso lokuhlaselwa sisifo sentliziyo [UHLAZIYO]
Namhlanje siza kukubonisa ilaptop eyenzelwe abo banika usetyenziso olusisiseko kwiPC ngaphandle kokuyeka uyilo, ukukhanya kunye nokuzimela, iPrimux ioxbook 1402f.
I-RAD5545, ikhompyuter eyilelwe ngokukodwa indawo yokuhamba
Ukungena apho siza kuthetha malunga nekhompyuter ye-RAD5545, iprototype eyilelwe ngokukodwa ukuba isetyenziswe kwindawo engaphandle.
I-Toshiba DynaEdge, iPC ehambelana nepokotho yakho kwaye inebhetri ehlanganisiweyo
UToshiba ubonise iPC epokothweni enomdla kakhulu. YiToshiba DynaEdge Windows 10 Pro kunye nesisombululo se-Intel Unite
Yile nto ijongeka ngathi i-Intel Core processor ye-8th isizukulwane
I-Intel iazise iprosesa yokuqala ye-8th yesizukulwane se-Intel Core. Ezi modeli zokuqala zijolise kwi-ultrabook nakwiilaptops eziguqulwayo
I-HP OMEN X yeLaptop, ilaptop yokudlala enokubakho 'kokugqitha ngaphezulu'
I-HP yandisa umgca wayo wokudlala ngokufika kweLaptop ye-HP OMEN, ilaptop egxile kumsebenzisi we-gamer ofuna ukonwaba kakhulu
Idijithali yaseNtshona yazisa ngeNkqubo yokuGcina engama-20TB
I-20TB yokugcina kulwakhiwo olunqabileyo oluncinci, luyenza ukuba ibe yeyona nto iyilelwe kakuhle kunye nenkqubo ephezulu yokugcina yangaphandle.
Uvavanyo lwesantya sikaGoogle ngoku luyafumaneka
UGoogle usandula ukwazisa ngenkonzo yakhe eSpain esivumela ukuba silinganise isantya sonxibelelwano lwethu lwe-Intanethi ngokukhawuleza.
I-ASUS Vivobook Pro N580, uluhlu olutsha 'lweelaptops' ezivela eAsia
I-ASUS ivelise ilaptop yayo yokugqibela ephezulu yokudlala kunye nemifanekiso kunye noyilo lweengcali: i-ASUS Vivobook Pro N580
Isamsung isungula enye yezona zinto zincinci ze-SSD kwimarike kunye namandla okufikelela kwi-2 TB. Le yi-Samsung SSD T5
I-EVGA SC17, ilaptop yokudlala ngokwenyani uya kufuna ukuba nayo
I-EVGA SC17 iya kuba lelaptop yokudlala eya kuthi yonke i-gamer ifune ukuba neyayo. Masiqwalasele le mveliso inomdla.
Ngoku kunokwenzeka ukuba uqhekeze ikhompyuter usebenzisa iimolekyuli zeDNA
Iqela labaphandi kwiYunivesithi yaseWashington likwazile ukuqhekeza ikhompyuter ngenxa yemolekyuli ye-DNA.
I-Intel Core X: zonke iinkcukacha zentsapho entsha ye-Intel processor
I-Intel Core-X ziiprosesa ezintsha eziza kuboniswa yinkampani kungekudala. Nangona kunjalo, zonke iinkcukacha zazo zonke iimodeli sele zisaziwa
I-Acer Chromebook 11 C771, intle, intle kwaye inexabiso eliphantsi kwimeko yesikolo
I-Acer Chromebook 11 C771 ilaptop eya kuthi isinike zonke izinto esinokuzifuna kwicandelo lezemfundo ngaphandle kokuchitha imali eninzi.
UToshiba usungula iidrive ze-SSD ukuya kuthi ga kwi-30 TB yendawo
UToshiba uvakalise izisombululo ze-SSD zenkampani ezinokugcina amandla ukuya kuthi ga kwi-30 TB
Inkampani yeNewskill ivelise isitulo esitsha kubadlali ababizwa ngokuba yiKitsune, ngexabiso le-149,95 euros.
Windows 10 iyaqhubeka nokukhula kwaye ikufutshane Windows 7
Windows 10 Isabelo sentengiso siphinde safumana esinye isabelo esiphulukene naso kwinyanga ephelileyo, ngelixa Windows 7 isengukumkani
I-AMD isibonisa iProjekthi 47, ikhompyuter enkulu ene-1 petaFLOP yokusebenza
Ngexesha lokubhiyozela i-SIGGRAPH 2017, i-AMD isimangalisile ngomboniso weProjekthi 47, ikhompyuter enkulu ene-1 petaFLOP yokusebenza.
Abafana baseNewskill basandula ukukhupha ikhibhodi entsha ebizwa ngokuba yiAura kwabona badlali bafuna kakhulu ngenani elikhulu lokukhetha ngokwezifiso
I-USB 3.2 iya kuvumela ukuhanjiswa kwedatha kwisantya se-20 Gbps
Iqela elikhuthazayo le-USB 3.0 lisandula ukunika ingxelo ngokusungulwa kwenqanaba elitsha le-USB 3.2 eliya kuvumela ukuhanjiswa kwedatha kwi-20 Gbps.
Guqula i-hard drive yangaphakathi iye ngaphandle
Ukuguqula i-hard drive yangaphakathi ibe yeyangaphandle yinkqubo elula kakhulu kwaye engabizi kakhulu esinokuyenza ngala manyathelo alula. Ngaba uyazi ukuba ungayenza njani?
Iqela labaphandi kwiYunivesithi yaseRice liphumelele ukuyila i-chip enokwenza abantu abaninzi abangaboniyo baphinde babone.
Ndiyabulela kule chip encinci evela kwiMicrosoft unokwenza inethiwekhi yakho ye-neural kwiRaspberry Pi
UMicrosoft usixelela ngeprojekthi yakhe enkulu yakutshanje, i-chip entsha elingana nengqolowa yelayisi enokugcina inkqubo yobukrelekrele bokuzenzela.
Le chip entsha yeRRAM iyakwazi ukuqhubekeka kunye nokugcina idatha
Ukusuka kwi-MIT sifumana ulwazi malunga nendlela entsha yokwenza i-3D yoyilo eya kusivumela ukuba senze iichips zeRAM ezintsha.
Inkampani yeViking Technologies isungula idiski ye-SSD ene-50 TB yokugcina eyenzelwe icandelo lenkampani kunye namandla angaphezu kwamawaka alishumi eeDVD.
Ezi zezona laptops zemidlalo zibalaseleyo kwintengiso
Namhlanje siza kukuxelela ukuba zeziphi ezona zixhobo zibalaseleyo zeelaptops zemidlalo esinokuzifumana kwimarike.
Uyenza njani uphicotho lweWifi
Ukuphicothwa kweWifi kusivumela ukuba sazi ukuba uqhagamshelo lwethu lweWifi lukhuselekile ngokuchasene nokungena ngaphakathi. Ngaba ungasichitha isitshixo se-WiFi? Fumanisa!
Ukuthengiswa kweekhompyuter, nokuba yi-PC okanye iMac, kuyaqhubeka ukwehla kwabo okuqhubekayo kwikota ngokulandelelana.
UDell wazise ilaptop yokuqala kwintengiso kunye nenkqubo yokutshaja ngaphandle kwamacingo, kodwa ngexabiso elibiza kakhulu.
Imonitha entsha evela kwi-AOC kunye nePorsche 'isusa' iintambo
I-Venture ehlangeneyo phakathi kwe-OAC kunye nePorsche isinika esweni ngeentambo ezifihlwe ngokupheleleyo kwi-vita
Iimodeli zeGlass zamva nje zisivumela ukuba sivule ukufikelela Windows 10
Iiterminal zenkampani yaseKorea i-Samsung yeyokuqala esivumela ukuba sivule ukufikelela kwiWindows ngenzwa yeselfowuni
I-AMD isungula iRadeon Vega Frontier Edition ngokusebenza ukuya kuthi ga kwi-13,1 TFLOPS
Amakhadi amatsha e-AMD Radeon Vega Frontier ngawokuqala kolu lwakhiwo kwaye enzelwe ngokukodwa iingcali
IPanasonic yazisa ngokuguqukayo kwimisebenzi enzima
IPanasonic isandula ukwazisa iToughbook CF-XZ6, ilaptop enzima apho ukuzinza kunye namandla kubalulekile.
I-Laptop yeSurface entsha kaMicrosoft ifumana i-0 kwi-iFixit
I-Microsoft Suface Laptop ifumene kwi-iFixit elona bakala libi elinokufunyanwa ngokubhekisele kumathuba okulungisa: zero.
Isikrini esinye, ubungakanani obulinganayo. Le yikhompyuter entsha yeRazer Blade Stealth
Inkampani iRazer iveza iBlade Stealth, ilaptop entsha eyonyusa iscreen sayo ukusuka kwi-12,5 ukuya kwi-13,3 ye-intshi ngaphandle kokunyusa ubungakanani besixhobo
I-E3 2017: UDell kunye neAlienware batyhila iiKhompyuter ezintsha zeMidlalo kunye neePeripherals
Ngexesha lokulunga kwe-E3 2017 yamva nje, uDell kunye neAlienware babekhona ukubonisa iiPC zabo ezintsha zokudlala kunye nezixhobo.
Ukuseta ixesha okanye ucime ixesha kwi-Mac yakho
Isifundo esilula apho sityhila khona indlela yokucwangcisa ukuvala, ukuqala kwakhona, ukulala, ukwenza kusebenze okanye ixesha lokuqalisa kwi-Mac.
Ezi zii-AIOs ezintsha ze-Asus zokukhuphisana neStudio Studio
Inkampani yaseTaiwan isandula ukwazisa ii-AIOs ezintsha ezingama-23,8-intshi ukukhuphisana, okanye ubuncinci uzame, nge Studio yeMicrosoft
Ngomhla we-23 kaMeyi sinokubona iSurface Pro 5 entsha
Ekuqaleni, isizukulwana esitsha sesihlanu seSurface Pro bekulindeleke ukuba sifike kumboniso kaMicrosoft we ...
Uyithumela njani ikhusi le-smartphone kwikhompyuter
Ukwabelana ngescreen se-smartphone kunye nekhompyuter kulula kakhulu enkosi kwezi zicelo zikubonisa namhlanje kweli nqaku.
Umphezulu weMicrosoft iphakamisa ubungakanani beetafile ngaphambi kwe-iPad
Ngethuba lokuqala, umphezulu weMicrosoft ugqithile kubasebenzisi be-iPad kulwaneliseko kunye nokusebenza.
Ukusebenza kweLogitech MK850, uhlalutyo kunye noluvo
Sivavanye ikhibhodi yokuSebenza yeLogitech MK850 kunye negundane, isixhobo esikuvumela ukuba usebenzise iinkqubo ezininzi ngaxeshanye enkosi kuLula -Tshintsha
I-Apple ibhengeza ukuvuselelwa kweMac Pro kunye nokuthetha ngayo yonke iMacs
Kuyacaca ukuba kukho iMac engakhange ifumane naluphi na uhlaziyo ixesha elide, nantsi iMac Pro kunye ...
Nge-Epreli 11, iMicrosoft izakukhupha Windows 10 Uhlaziyo loMdali
IMicrosoft isandula ukubhengeza ukukhutshwa kwenguqu yokugqibela Windows 10 Ukuhlaziya abaDali, uhlaziyo olukhulu olulandelayo lwe Windows 10
Inkqubo yeMicrosoft beta, iWindows Insider, igqitha kubasebenzisi abazizigidi ezili-10
The Windows 10 Inkqubo ye-beta, Windows Insider, ifikelele kubasebenzisi abazizigidi ezili-10.
Le yindlela iApple efuna ukuyiguqula i-iPhone yakho okanye i-iPad kwiilaptop
I-Apple isandula ukubhalisa ilungelo elilodwa lomenzi wechiza apho ibonisa ngendlela ecacileyo ukuba bafuna ukuyiguqula njani i-iPhone yakho okanye i-iPad kwiilaptop epheleleyo.
Intel Optane, idiski ye-SSD onokuyisebenzisa kwi-RAM
I-Intel Optane ligama elikhethwe yinkampani edumileyo ukubonisa uluhlu lwayo lweedrive ze-SSD eziphezulu kakhulu.
IMicrosoft ithintela iikhompyuter ngeeprosesa zeKaby Lake ekuhlaziyweni kwayo Windows 7 kunye neWindows 8.1
Amarhe okuba i-Intel's Kaby Lake entsha ayizukuhambelana Windows 7 kwaye iWindows 8.1 iqinisekisiwe
I-Seagate iyasimangalisa nge-hard drive eyi-12 ye-TB
I-Seagate Enterprise Capacity V7, uluhlu olutsha lweedrive ezinzima zomthamo ezinokufikelela kwi-12 TB.
Ukukhawuleza ukuya kuthi ga kwi-624MB / s yamakhadi e-SD kwenziwa ukuba kwenzeke ngalo mgangatho mtsha
Umbutho we-SD usandula ukupapasha umgangatho omtsha wamakhadi e-SD abizwa ngokuba yi-UHS-III ethembisa ukuphinda kathathu isantya sokudluliswa kwedatha.
ISurface Studio izakufika eFrance ngoJulayi
Ngokuka Microsoft France, iSurface Studio izakufika kwilizwe elingummelwane ngoJulayi olandelayo ngeeyunithi ezinqunyelwe.
Iimpawu zokuqala zenguqulo elandelayo ye-macOS ziqala ukuvela
Iimpawu zokuqala ze-macOS 10.13, uguqulelo olulandelayo lwenkqubo yokusebenza ye-Apple yeeMacs, ziqale ukubonakala
IMicrosoft inikezela ngemodeli entsha yeNcwadi engaphezulu kwivenkile yayo esemthethweni
Abafana abavela eRedmond bongeze imodeli entsha yeNcwadi engaphezulu, imodeli eya kuthi ifike kwintengiso ukusuka nge-10 Matshi.
UGoogle uvale ucango kwisizukulwana esitsha seelaptops zeChannelbook
Ngaphandle kwento yokuba uGoogle uza kuqhubeka nokuphuhlisa i-Chrome OS, inkampani ivale ucango lokuba isizukulwane esitsha seChannelbook sibe nakho
INvidia GTX 1080 Ti, ikhadi lemizobo lelona lifunwa kakhulu
I-Nvidia GTX 1080 Ti, ikhadi elitsha lemizobo enezinto ezinomtsalane, lifikelela kwimarike ngexabiso le- $ 699 ngeyunithi nganye.
Ungayihlawulisa ngokupheleleyo iselfowuni yakho kwimizuzu nje engama-20 ngenxa yeMeizu Super mCharge
I-Meizu Super mCharge yinkqubo entsha yezixhobo eziza kukuvumela ukuba ubize ngokupheleleyo ibhetri yakho ehambayo kwimizuzu nje engama-20.
I-Helio X30, iprosesa ye-10nm 10-core yeMediaTek
Xa besibona izolo intetho kwi-MWC yemodeli entsha yeMediaTek besimangalisiwe ngumsebenzi ...
I-Intel yehlisa amaxabiso phantse kuzo zonke iiprosesa zayo
I-Intel ibhengeza izaphulelo ukuya kuthi ga kwi-300 yeedola kuzo zonke i-i3, i5 kunye neeprosesa ze-i7 ezikhoyo ngoku kwintengiso ngaphambi kokufika kwe-AMD entsha.
UGoogle umangalela u-Uber ngokuba ulwazi oluyimfihlo olunxulumene nezithuthi ezizimeleyo
UGoogle umangalele nje u-Uber ethetha ngobusela bolwazi oluyimfihlo. Ngale ndlela u-Uber wayeza kubona ukuba luthintelwe njani uphuhliso lwenzwa.
USony usibonisa elona khadi likhawulezayo le-SD ukuza kuthi ga ngoku
Ukungena apho siza kuthetha khona ngeSony SD Card SF-G, elona khadi likhawulezayo kwihlabathi.
I-AMD Ryzen, iprosesa eya kuthi inike okuninzi ngokuthetha ngayo
Okokugqibela nasemva kwamahemuhemu amaninzi kunye nexesha lokulinda, i-AMD Ryzen 7 yinyani enokwenza i-Intel yona inyikime.
I-Surface Pro 5 iya kuboniswa ecaleni Windows 10 Uhlaziyo lwaBenzi
Ukuvuza okutsha kuphakamisa ukuba inyanga ka-Epreli inokuba kukumiliselwa kwesizukulwana sesihlanu seSurface Pro
IMicrosoft inyusa amaxabiso eSurface Pro 4 ngenxa yeBrexit
Isigebenga saseRedmond sisandula ukubhengeza ukunyuka okutsha kwixabiso leemveliso zalo ngenxa yokuhamba kwe-United Kingdom kwi-European Union.
Isixeko saseMunich siyakushiya iLinux kwaye sibuyele kwiWindows
Isixeko saseJamani iMunich sithathe isigqibo sokuba lixesha lokuba sibuyele kwiWindows njengenkqubo yokusebenza yazo zonke iikhompyuter, sishiya iLinux
UApple urhoxisa i-LG Ultrafine 5k kwivenkile ekwi-intanethi
U-Apple kuye kwanyanzeleka ukuba arhoxe i-LG Ultrafine 5k kwintengiso zombini kwiivenkile zenkampani nakwivenkile ekwi-intanethi.
I-NSA iqinisekisa ukusetyenziswa kwezixhobo zeSurface nge Windows 10
I-Arhente yoKhuseleko kaZwelonke (i-NSA) isandula ukubhengeza ukuqinisekiswa kwayo Windows 10 kunye noluhlu oluphezulu njengesixhobo esikhuselekileyo
Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy TabPro S2 nge Windows 10
Siza kukubonisa iinkcukacha eziya kuthi phantse kuzo zonke iimeko zilawule i-Samsung Galaxy TabPro S2
Uhlaziyo lwamva nje kwisikhangeli seOpera sigxile ekuphuculeni isantya
Inguqulelo yamva nje yeOpera, inombolo 43, isinika izinto ezintsha ezininzi ezijolise ekuphuculeni isantya sokulayisha iphepha kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kweCPU
I-beta entsha ye-macOS 10.12.4 ibhekisa kwi-MacBook Pro 2017 entsha
I-beta yamva nje ephehlelelwe yiApple inikezela ngolwazi kwiimodeli ezintsha zeMacBook Pro eziza kufika kulo nyaka.